UThor Schrock: usozigidi olandelayo we-inthanethi? | Martech Zone
UThor Schrock: usozigidi olandelayo we-inthanethi?
NgeSonto, ngoJuni 24, i-2007 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Ukubloga umngani, UThor Schrock, kumkhankaso we Usozigidi olandelayo we-inthanethi!
IThor isheshe yaba ngumthombo omkhulu wochwepheshe bezobuchwepheshe. Ngicabanga ukuthi esinye sezizathu esenza ngithande uThor nebhulogi yakhe kakhulu ukuthi unolaka ekuyikhuthazeni kodwa uthobekile futhi unobungane ngendlela enza ngayo lokho. Uzongithumela i-imeyili kanye ngesikhashana - kepha kuhlala kungokwakho, kuyacatshangelwa futhi kuyintokozo ukuyifunda.
UThor ungibhalele namuhla futhi udinga usizo lwakho ukumenza abe yi-Next Internet Millionaire! Ngikholwa ukuthi ukushayela kwakhe nomdlandla wakhe kuzomhambisa lapho noma ngabe kunomncintiswano noma cha.
Vote for UThor Schrock, usozigidi olandelayo we-inthanethi! Qiniseka ukuthi uyangeza I-Thor's blog nakumfundi wakho! Kepha mina, ngingajabula ukuba yi-Intanethi elandelayo eyikhulu lamawaka -waka.
Jun 24, 2007 ku-2: 46 PM
Ngiyabonga kakhulu ngokubhala nokuncoma uDoug! Kusho lukhulu kimi futhi ngifunde okuningi kubhulogi yakho kulo nyaka odlule.
Ngazise uma kukhona konke engingakwenzela khona!
Jun 25, 2007 ku-10: 46 PM
UJun 26, 2007 ngo-8: 25 AM
Ekuqaleni nami ngangizosebenza ngo-Millionaire olandelayo we-Intanethi kepha nginqume ukuya kuBillionaire esikhundleni salokho !!
Njengawo wonke umuntu oza nomqondo wezigidi noma wezigidigidi kubonakala njalo kuthatha imali ukukwenza kwenzeke! Umbono owodwa engibe nawo kabusha: Ama-Flash Slideshows akhombisile ukuthela enye inkampani. lokho kuthengwe ngokushesha yi-MySpace ngama- $ 10 noma ama- $ 20 Million Dollars - ngakho-ke kungenzeka! Ngisengathanda ukukhipha umbono wami ngomnyango ngoba uqinisekisiwe + izimbangi ezinjengeYahoo! noma iGoogle noma iMicrosoft (abantu abangakwazi ukusika isheke !!;)) kufanele babe nentshisekelo *
Ngizobheka i-Thor's Blog!
Halala !! Billy;))
Usozigidi olandelayo we-inthanethi
Jun 26, 2007 ku-3: 59 PM
Wonke umuntu nakanjani udinga ukuvotela uThor. Ungumuntu omuhle futhi wanikeza ingxoxo enhle nge-Next Internet Millionaire Big Action Podcast.
Nakanjani yihlole bese ulinganisa ividiyo kaT Thor audition ibe ngu-10. Ungumuntu omkhulu othatha isenzo esikhulu ngaphandle kokuba yimpango!